ဥရောပ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 44
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ သြဂုတ် ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – လွှတ်တော်ထဲ ကျတဲ့ ခဲ (Ku Mo Jo)
သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ဒီတခေါက်တော့ ၂၀၀၇ နဲ့ ၂၀၀၈ တုန်းကထက် ကုလ အက်ရှင်အလွန်မြန်တယ် ဆိုပဲ (သင်ခန်းစားယူဖွယ်) သြဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – အမိန့်အရ အပေါင်ဆိုင် အဲလေ နောက်တဖွဲ့
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – အမိန့်အရ အပေါင်ဆိုင် အဲလေ နောက်တဖွဲ့ သြဂုတ် ၁၃၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိစေရ သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
“၈၈ – ၂၄နှစ်” မကြေပွဲမှသည် အောင်ပွဲဆီသို့ (လေလား) – Ku Mo Jo
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – “၈၈ – ၂၄နှစ်” မကြေပွဲမှသည် အောင်ပွဲဆီသို့ (လေလား) သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ထိုင်ရာက မထနိုင်တာ အာဏာ
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ထိုင်ရာက မထနိုင်တာ အာဏာ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ဆေးသကြားစိမ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မုိုးခါးရေတွေ ရမယ် (Ku Mo Jo)
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ဆေးသကြားစိမ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မုိုးခါးရေတွေ ရမယ် (ဂျာနယ်တွေ ဂျာနယ်တွေ …) သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်း ကူမိုကြိုး – ပြည်တွင်းဖြစ် နိုင်ငံခြား ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – မြန်မာပြည်က ဆေးမရှိတဲ့ လိမ်တူချစ်သူများ
ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
Page 44 of 45«1...4142434445»
Eikar Aww - Staire
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး - မိဘမကောင်း သားသမီးခေါင်း
အီကြာအော် - ဖွတ်ကလေး - ဆိုက္ကားနင်း ဖွန်ကြောင်ခြင်းနှင့် ခက်သေးရွာသား ဘသုံးလုံးများ
Ku Mo Jo - Burmese Black Magic Democracy
လမ်းဘေးသတင်းထောက် – ဘယ်တော့ ပြောင်းလဲမှာလဲ https://t.co/aONXVCTZKs https://t.co/fbTbBW2Kx5 about 36 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မောင်လူရေး – ဇိတ်ဇလီ https://t.co/zHcv3jSMcb https://t.co/OCCBfyJzoy about 23 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်းရွှေဗိုလ်ရဲ့ တိုးရင် … တက်မယ် … https://t.co/x5whrRygFz https://t.co/XUNg4BbbP7 about 23 hours ago ReplyRetweetFavorite